Maurice de Hond waxay helaysaa sharciga hal iyo badhka nus mitir (fiidiyow): Martin Vrijland
Maurice de Hond waxay heshay micnihiisu yahay hal iyo badh mitir qaanuun (fiidiyow)
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 22 May 2020	• 13 Comments
33ka daqiiqo ee soo socda, eeg Maurice de Hond, ninka ka dambeeya codbixinta ballaaran ee qaran ee aan "si buuxda u aamini karno". De Hond waxay ogaatay in daraasadaha qaarkood ay muujinayaan in qaanuunka hal mitir iyo badh uu yahay wax aan micno lahayn isla markaana coronavirusku ku fido marka hawadu liidato.
Maurice dabcan si adag ayuu ugu qanacsan yahay jiritaanka fayraska iyo websaydhkiisa smartexit.nu Waxaan helnaa wicitaan aan ku buuxinno faahfaahintaada ku saabsan haddii aad cudurka qabtid iyo in kale iyo astaamaha aad qabtid. Xaqiiqdii, taasi horeyba waa hab caqli leh xagga barnaamijyada ay dhowaan yeelan doonaan si ay ula socdaan.
Haa, halkan barta aan badanaaba ka hadalno mucaaradka la xakameynayo iyo aqoonsiga lambarka 33 ee Freemasonry u adeegsaday si ay u muujiso inay gacanta ku hayaan. Kuma aaminsani Maurice de Hond, codbixintiisa qaran iyo muuqaalkiisa 33-daqiiqo ah, hal mitir.
Waxaan ognahay inay tahay sidii hore sidii wadada loo maro Rome, in had iyo jeer ay fiican tahay in la abaabulo dhaleeceynta dowladda lafteeda. Haddii aad isku mar dadka ku dhiirrigeliso inay buuxiyaan xogtooda caafimaad inta lagu gudajiro dhaleeceyntaas, waxaad horeyba ugu haysataa dadkaas shabakadaada. Si dhakhso leh u soo dejiso barnaamijyada oo Maurice si fiican ayey ula socon kartaa "faafitaanka coronavirus".
In kasta oo uu dhaleeceeyay, Maurice de Hond waxay kugu dhiirigelineysaa inaad ka qeybqaadato kormeerka oo kuu diyaariya barnaamijyada xogta weyn
Qof kastaa wuu ka garan karaa cinwaannadooda in bulshada hal mitir iyo badhka ah ay tahay mid qoyan oo inagana waa la ina khiyaanay. Qof kastaa wuxuu dareensan yahay inay jiraan wax intaa ka dambeeya mitirkaas iyo badhka. Gudaha maqaalkani Waxaan cadeynayaa (oo daliil ah taas) in hal mitir iyo badh loo baahan yahay si loo suuro galiyo akhrinta tooska ah iyo qorida waxqabadka DNAdaada / RNA. Sidaa darteed qof waliba waa inuu ilaaliyaa masaafad ku filan tan. Masaafadaas waa mid faaido leh oo lama huraan u ah "internetka waxyaalaha" oo uu ninku ku sameyn doono 1 waxyaabo.
Waa inaan ka soo dhaqaaqnaa Krimson Maurice de Hond "xariif caqli gal ah" oo aan uga baxno “smart smart”. Taasi waxay u muuqataa inay aad u fiican yihiin oo run ahaantii ma jiraan wax la dhihi karo, laakiin waligey kuma aaminin De Hond tirakoobkiisa mana aamini karo tirakoobka gobolka. Taasi ma been baa? Haa, ugu yeer tuhun caafimaad qaba.
Sida aan ka warqabo, waa inaanan u aadin bixitaan caqli leh, laakiin ciqaab naxariis darro ah oo ku timaadda dowlad been ah oo ay tahay in si deg deg ah xukunka looga tuuro laguna beddelo wakiillo ka socda dadka ay soo bandhigeen dadka. Wasiirada lagu doorto dimoqraadiyada tooska ah ee dhaarta dadka u hoggaansamaysa halkii taajkii laga saari lahaa.
Waa inaan joojino cabashada dowlada maxaa yeelay waxaan siinay sharcigaas sharciga ah. Maurice de Hond waxay muujineysaa xushmad iyo qadarin Mark Markte waxaana sanado badan loo geeyay sidii nin loo oggol yahay inuu iibiyo dimoqraadiyadda siyaasadeed ee musuqmaasuqa musuqmaasuqa isagoo adeegsanaya "codbixinta". Sida kaliya ee looga bixi karo xaaladdan waa in lala macaamilaa golaha liistada iyo khiyaanada golaha adag oo aadan siinin wax dhibco ah mar dambe. Maaha bixitaan caqli leh, laakiin kacaan!
Yaan lagu gelin dabinka dambe ee badbaadada; Mid ka mid ah kuwa xumaynaya rajo xumada isbedelka, inta lagu riixayo dhinaca 'cabiridda waa garashada' fikirka. U dooro kacaan adag oo cad oo lagama maarmaan u ah, tusaale ahaan, in laga hortago sharciga khasabka ah ee tallaalka iyo in la tirtiro hal mitir iyo badh wax aan micno lahayn. Tag www.fvvd.nl
Hal soo gal gelitaan ah: wikipedia.org, smartexit.nu, fvvd.nl
Gobolku wuxuu u codeeyay 900 oo qof wuxuuna ugu yeedhay wakiil inuu riixo barnaamijyada corona (Cusboonaysii)
Shirka jaraa'id Mark Rutte iyo Hugo de Jonge: bulshada hal mitir iyo bar iyo hordhaca barnaamijyada
Masruufka ka dhanka ah Arimaha Dowlada Jordie Zwarts ayaa lagayaabaa tan, laakiin wax guul ah ma gaaro
Qufulka Coronavirus: sharciga degdegga ah, dastuurka iyo xuquuqda aasaasiga ah, waxaad u baahan tahay inaad ogaato, waxaad sameyn karto (Xeerarka degdegga ah waa dastuuri sharci darro ah)
Nasashada corona waa sankaaga ugu xun: khayaaliga ah in xorriyadda ay dhowdahay
Tags: mid iyo badh, kafeega, Fayruuska corona, de, bixitaanka, featured, Hond, intelligente, xirid, Maurice, meter, cilmi baaris, bulshada, smart, video, weltrschmertz
22 May 2020 ee 11: 46
Haa halkaas waxaad ku leedahay mid kale, mid ka socda naadiga iyo had iyo jeer hadalka iibka macaan. Markaad maqashid waxay u hadlayaan sidii iyagoo xigmad ku leh gacantooda. Waxay daawan karaan aamusnaanta warbaahinta dhowr sano ama kaliya way ka tegi karaan si joogto ah waxayna qaadan karaan 'Corona'. Naxdin leh oo iska sii rux.
Dadku way saxeexeen waraaqda Hada! https://www.fvvd.nl
22 May 2020 ee 12: 08
Waxay noqon kartaa, laakiin waan ka fogaan karnaa wadarta 33 dhimasho haddii aan qaadno tallaabooyinka. 😷
ps: America layliga waxaa lagu magacaabaa C rimson C ontagion  waxay noqon laheyd cinwaanka 'Suske en Wiske'.
22 May 2020 ee 12: 26
Haa, haa, waxaad sidoo kale bilaabeysaa inaad masaxdo wax kasta oo ku saabsan xaddidaadda xorriyadda hadalka. Waan kaftamayaa.
Hagaag, maahan wax la yaab leh markay dadka waayeelka ah ee qaba cabasho jir ahaaneed oo daran iyo inta badan nafaqo daro, cunno diyaarsan ay ku dhintaan guryahaas dadka lagu xanaaneeyo. Dadka da'da ah way wada joogi doonaan oo is dhowraan sidaa darteedna midba midka kale wuxuu ugu gudbiyaa hargabka. Dawladdu way ku fashilantay, waayeelku ma ahayn in meel loo wada hayo. Tani waa mid laga yaabo in lagu canaanto oo xitaa waa la ciqaabayaa inta aan ka hadlayo. Wali ma jiraan saraakiil adag iyo xeer-ilaaliye oo xiri doona madaxdooda iyo / ama maareynta guryaha hawlgabka / RIVM iwm. Dabcan maya. Nasiib wanaagse waxaan ku nool nahay waddan 'xor ah' dowlad 'dastuuri ah'.
22 May 2020 ee 14: 31
Way fududahay in la hadlo Sunny haddii aan hadda xisaabinno xisaabinta macquul ah ee dhammaan AOW iyo waajibaadka howlgabnimada, gaabis ayaa soo bixi doona mana dammaanad qaadi karno kharashaadka mustaqbalka. Ka dib oo dhan, dawladdu waa soo jeedin iyo kordhinta, xeryaha uruurinta Covid waa shuruud si fudud oo nadiif ah iyada oo aan la kordhinaynin garaaca wadnaha.
Halkan mid kale 👃
Maxaad u dooneysaa inaad tan ogaato? ayaa qoray:
23 May 2020 ee 11: 06
Waxaa sidoo kale xal loo helay dhibaatooyinka hawlgabkan:
“Nidaamka cusub ee hadda miiska saaran waa inuu joojiyaa wada hadalada ku saabsan xaalada xun ee lacagaha howlgabka, taas oo ka dhalatey inaysan awoodin inay ka soo baxaan sheegashadii xubnahooda horay loo balan qaaday. Sidoo kale muhiim ma noqon doonto in si joogto ah looga wada hadlo 'heerka dulsaarka' ama in la dhimo hawlgabka iyo in kale.
Si kale haddii loo dhigo: dammaanad dambe majiraan damaanad qaadida hawlgabkaaga iyo xitaa haddii lacagtu lafteeda laftoodu ay iyagu laftooda la xisaabtami doonaan. Ka dib oo dhan, waxay u sabab tahay isbeddelada isbedelka saamiyada.
22 May 2020 ee 12: 10
SandinG ayaa qoray:
22 May 2020 ee 12: 18
Kat, Vogel, sidaa darteed waxaad uga soo qaadaysaa haddii kale madaxyada khazars ah. Sanka iska saar….
guppy ayaa qoray:
22 May 2020 ee 20: 12
Waxaad u jeeddaa, sanka (Gerrit) Zalm ee ku tusay sida loo faaruqiyo banki oo aad biilka dadka la gasho
23 May 2020 ee 00: 15
Taasi waa sax, laakiin waa inaan qirto iyaga inay labada garabka si fiican u ciyaarayaan ciyaarta Hegelian. Waqti iyo waqti mar labaad, celceliska dadka deggan Madurodam waa la ciyaaraa, xiiray oo xiiray oo waxaa loo diraa caarada uumiga, mise waxay ahayd dabinkii xumaa?
Maahan tiyaatar qurxoon mana ahan lacag la'aan… ooh, akoonka (dejinta) akoonka wali lama raacin😷😷
23 May 2020 ee 11: 38
Ma aanan siin hambalyo. Iyagu taas kuma ay sameeyaan sidoo kale
dadka aan ka tirsaneyn kooxdooda oo noqon kara ama noqon kara tartamahooda .. Ah, Waxay horay u sii saadaaliyeen cudurka faafa ee cusub, laga yaabee in dalbashada ay tahay eray ka fiican. Sida ay yihiin clairvoyant oo gaar ah. Addoonsiga ku hay hakinta iyo jahwareerka, Ujeeddadooda. Goorma ayay runtii baxayaan. Shalay ka wanaagsan maanta.
Saxiix arjiga hadda! Kuma kaco waxna.
2 camera ayaa qoray:
24 May 2020 ee 10: 39
Waxa aanan arag
Wadarta guud ee Argagixiso ee Afrika
Kumaan kun oo dhibbane cudurka qaaxada (malaria) ayaa dhintey sannadihii ugu dambeeyay.
Laakiin hadda dhawr xaaladood oo corona ah, xerooyinka xabsiyada ayaa la dejiyey ... hoos ka fiiri
Waxay ka qaadaan dadka wadada waxayna ku tuuraan xerooyinka 🙁
Sephus ayaa qoray:
24 May 2020 ee 15: 15
Muuqaalkan hoose wuxuu qaadanayaa 13 daqiiqo. Wadajir? Waxaan u maleynayaa in si quruxsan loo sameeyay
Ama sida qof ku dhaho faallooyinka: waxaa jira run ka badan halkan 13 daqiiqo marka loo eego waxaad helaysay 12 sano ee waxbarashada gobolka
24 May 2020 ee 15: 35
Eygii iyo tirakoobkiisii ​​wuxuu ka soo qaatay koofiyadkiisii ​​markuu dhashey. Daraasad malahan, kaliya waxa uu u maleynayaa sida iyo waxa.
Sidaas ayaan u maleynayaa.
« Immisa qof oo reer Dutch ah ayaa wali bixin kara biilashooda inta lagu gudajiro qalalaasaha Corona?
iPhone wuxuu qariyaa barnaamijka 'covid-19 app' ee ugu dambeeyay i-OS 13.5 »
Wadarta booqashooyinka: 2.464.361
Awoodda isbeddelka waxay ku bilaabmaysaa daadinta cabsi, barnaamijyo iyo khiyaanooyin been ah waxayna isu beddelaysaa kacaan run ah
iPhone wuxuu qariyaa barnaamijka 'covid-19 app' ee ugu dambeeyay i-OS 13.5
Immisa qof oo reer Dutch ah ayaa wali bixin kara biilashooda inta lagu gudajiro qalalaasaha Corona?
Mar dambe ma geli kartid dukaanka hadaadan magacaaga iyo nambarkaaga addoonka ah siin dukaanka taasina waa bilow
2 camera op Maxay dad badan oo hareerahaaga ah ugu muuqdaan indhoole?
Riffian op iPhone wuxuu qariyaa barnaamijka 'covid-19 app' ee ugu dambeeyay i-OS 13.5
ClairVoyance op Maxay dad badan oo hareerahaaga ah ugu muuqdaan indhoole?
SalmonInClick op iPhone wuxuu qariyaa barnaamijka 'covid-19 app' ee ugu dambeeyay i-OS 13.5